Misoro yeNhau, China, Chivabvu, 26, 2022
Vanoshanda nekanzuru yeHarare votadza kurasa marara kuPomona zvichitevera chibvumirano chakonzera mutaura chiri kusungira kanzuru kuti ibhadhare mari inosvika mamiriyoni mazana matatu US300 million kukambani yeGeogenix BV iyo iri kuda kubhadharwawo zviuru makumi maviri nemaviri pazuva kana kuti US$22 00 kana poraswa marara.
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vopeta musangano kuWorld Economic Forum kuSwitzerland vachisangana nezvizvarwa zveZimbabwe izvo vakavimbisa kuti zvichatenderwa kuvhota zviri kunze kenyika. Asi vamwe vanoti muromo hauzarirwe nerwizi.
Zimbabwe yopeta musangano nenyika dzemuAfrica, China neJapan wakanangana nekukurudzira kuti nyanga dzenzou dzibvumidzwe kutengeswa.
Sadunhu Vheremu, VaLevison Chikutu vekuChilonga kuChiredzi, avo vari kurwira kodzero dzevagari vemunzvimbo yavo kuti vasabviswe pavhu remadzitateguru avo richipihwa kukambani yeDendairy inoda kurima sora remombe vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira kupandukira hurumende.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuTexas muAmerica Muzvare Zoe Chirenda vanove mwana wevaive murwiri werusungunuko vobatsira vanasikana kumaruwa nezvekushandisa pavanenge vachitevera kana kuti masanitary pads.
Muchirongwa chedu cheWomen’s Roundtable na 8pm nhasi, tiri kutarisa nyaya yekuti vanasikana vasati vasvika makore gumi nemasere vasanzi vabvuma kuita zvepabonde kana kuroodzwa. Tichataurawo nezvemabasa ari kuitwa nemadzimai kuzvisimudzira nekusimudzira vamwe kunyangwe zvinhu zvakaoma munyika.